Beetroot | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Chard: oke nke iche maka akuku
Mangold bụ osisi herbaceous mara mma, nke a na-ahụkarị nke ndị bi na ya, bụ nke na-esite n'ezinụlọ ndị na-elekọta ezinụlọ. Mpaghara nkesa bụ etiti dị n'etiti na n'ebe ndịda nke Europe. E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche na agba chaa chaa (acha ọcha, edo edo, acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ) na ụdị nke epupụta, nke nwere ike ịmegharị na ọbụna.
Uzo esi eme ka ha ghara ichota beets maka oyi n'ime friza
Beetroot bụ ngwaahịa nke echekwara maka ogologo oge, ọ dị na shelves n'afọ niile, n'ihi ya, o yiri ka ọ nweghị isi na-akwadebe ya maka oge oyi. Ma ọ bụrụ na owuwe ihe ubi aghọọ ọmarịcha, ma ọ dịghị okpuru ulo maka nchekwa, ọ dịghị ihe fọdụnụ kama ịnwa igbochi ihe mgbọrọgwụ. Ọ na-apụta na e nwere ọtụtụ ụzọ isi mee ụdị ọrụ ahụ, dịka ha na-ekwu, "n'ụlọ".
Iberibe beets: uru na nsogbu, usoro ndị a na-ewu ewu, ngwa
A na-ewere Beetroot otu n'ime akwụkwọ nri ndị kasị ewu ewu na Ukraine na nso ná mba ọzọ. Nke a abughi ihe mgbagwoju anya, n'ihi na ihe eji acha uhie uhie bara uru na vitamin na mineral. Iberibe beets na-enye gị ohere ichekwa uru bara uru nke ngwaahịa ahụ maka afọ zuru ezu. Uru nke usoro owuwe ihe ubi Ndị mmadụ achọpụtawo na ọ bụrụ na mkpụrụ osisi ma ọ bụ akwukwo nri ọ dị ọhụrụ, ọ ga-ejide ọnụ ọgụgụ ndị bara uru.
Ntugide ntu oyi, uto mkpụrụ osisi na mkpụrụ ọma, Nadezhda cherry
Euonymus na-atụgharị: nkọwa na foto, atụmatụ nke ọdịda na usoro nlekọta
Ahụhụ na ụlọ - na-acha ọcha osisi lice. Kedu ihe na - eme ka ọdịdị ahụ na ụzọ isi kpochapụ ọrịa ahụ?
Shchitovka currant: ihe iji merie ha, foto
Mgbe geese malitere na-efe efe n'ụlọ
Nevsky poteto: àgwà varietal, kụrụ ma lekọta
Ntughari di iche iche nke oke ihe ubi - tomato "Ugwu di na snow": ihe omuma, ihe ndi ozo, foto